Gadaa Booranaa 71essoon Guyyoo Gobbaa
Abbaan Gadaa Booranaa 72essoon Dhiyoottu Baallii fuudha
Abbaan gadaa Booranaa ka qaraa Gadayoo Galgaloo.Raabii Booranaa ka qaraa Yaayyaa Fulleellee.Gadaammojjiin Booranaa ta qaraa Hoolee Bonayyaa.
Abbootii Gadaa Booranaa
Gadaa ganna saddeetitti wal irraa fuudhan.Gadaan Booranaa gogeessa (institution) shan qabdi. Baalliin gogessa tokko ganna 40 irra marti.Abbootii Gadaa Booranaa jaha.Gadaan Booranaa sadii, Angafii Gadaa Booranaa ykn Adulaa Fiixeen Booranaa Guyyoo Gobbaa,ka amma Gadaa harkaa qabu kana jechuu.
Maqaan abbootiin gadaa jahaan waliin qaban,Adulaa.
Ollaan Abbootiin Gadaa qubatan Yaa’a jedhan.Yaa’ii hujii Gadaa hojjachuuf ganna saddeeti keessatti ardaa jilaa hedduu keessa godaana.Godaanna tanaan Gooroo jedhan.Tanaaf yoo hedduu Yaa’ii Gooroo gadaanee ardaa…qubatee ykna ardaa...jiraa jedhan.
Yoo Abbaan Gadaa Baalii fuudhuu/kennuuf qophaa’u nama hedduutti ollaa Abbootii Gadaatti qubata.Quftuma kanaan Odaa Bulan jedhan. Fkn Yaa’ii Odaa bule.
Magalatii duraa ka’aa elmadhaa jechuu.Ka itti aanu bobbaafadhaa(horii nu duraa gorsaa) jechuu.Ka sadeessoo kunoo ya dhiyyaannee jechuu.Ka afreessoo kuno ya asi geennee jechuu.
Yoo Baallii kennan,ka kennu “Hoo baalii” jedha..ka irraa fuudhu ammoo “kenni Baallii” jedha.Hoo Baallii!...kenni Baalii!.
Eebba jaarsa Booranaa
Warrii Doorii yoo Baallii fuudhuu akkana jedhee achiin duubatti farda irra bu'ee warra ufiitti qajeela.
“G.G.G . Gadaa !, Harboora!Abbaa Biyyaa!” jechaa Baallii fudhatee farda irra bu'ee Yaa’a ufii (ollaa abbootii gadaa) tiin qajeela.
Abbaan gadaa yoo Baalli kenne Abbaa seeraa ta'a.Abbootiin seeraa Booranaa amma jiran lama Liiban Jaldeesaa fi Jilo Aagaa.
Abbootiin Gadaa yoo Gadaa ufi irraa kennan yuubomte jedhan.Yoo Abbotiin Gadaa mataa buufattu Baallii kennitee,yoobomtu lubii itti aanu; raabaa, kuusaa, gammee...tahee jalaa guddachaa oli dhufee itti gaafatama itti aanuuf ufi qopheessa.